'आँधीबाट अफ्ट्यारो परेकाहरुले सम्पर्क गर्नु... :: ज्योति देवकोटा :: Setopati
'आँधीबाट अफ्ट्यारो परेकाहरुले सम्पर्क गर्नु होला' - नेपाली दूतावास
सेतोपाटी वाशिन्टन डिसी
अमेरिकाको टेक्सास लगत्तै फ्लोरिडामा आएको आँधीमा परि मर्नेहरुको सँख्या ६ पुगेको छ। हिजोबाट सुरु भएको आँधीले फ्लोरिडामा वस्ने करिव ६० लाख अमेरिकनहरु सुरक्षीत स्थानमा सारिएका छन भने हालसम्ममा ६ जनाको ज्यान गएको सुरक्षा अधिकारीहरुले बताएका छन।
फ्लोरिडामा वस्ने नेपालीहरु कसैलाइ अफ्ट्यारो परे तत्काल समपर्क गर्न नेपाली राजदूत डा. अर्जुन कुमार कार्कीले आग्रह गरेका। यसअधि दूतावासले फ्लोरिडाबाट आँधीमा परेका नेपालीहरुको फोनको रेस्पोन्स नगरेको गनासो गरिएको थियो। डा. कार्कीले टेलिफोन नम्वर समेत सार्वजानिक गर्दै कुनै पनि नेपालीलाइ अफ्ट्यारो परे तत्काल सम्पर्क गर्न आग्र गरेका छन।
अमेरिकन सुरक्षा अधिकारीहरुले बताए अनुसार करिव ६० लाख मानिसहरु अन्धकारमा छन भने उनिहरुलाइ खानाको अभाव हुन थालेको बताएका छन। फ्लोरिडाका गभर्नर रिक स्कटले बताए अनुसार फ्लोरिडाको आँधीको प्रभावलाइ ब्यवस्थापन गर्न अझ केहि लाग्ने छ। 'हरेक नागरिकलाइ शान्त र धैर्य गरेर वस्न हामीले अनुरोध गरेका छौँ। जतिसक्दो चाँडो राहत र बिजुलीको ब्यवस्था गर्ने तयारीमा छौँ।'
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २६, २०७४, ११:३९:५९